Ukuhweba kwangaphambili: Umhlahlandlela Wabaqalayo - Reg Trading
Post Tags Trading strategies zulu
Ukuhweba kwangaphambili: Umhlahlandlela Wabaqalayo
Uyini Umakethe We-Forex?
Umlando Omfushane we-Forex
Ukubuka konke kwezimakethe ze-Forex
Ungaqala Kanjani Ngokuhwebelana Kwangaphambili
Izinzuzo Nezingozi Zokuhweba Forex
Imakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe yilapho kuthengiswa khona izimali. Izimali zibalulekile ngoba vumela ukuthengwa kwezimpahla namasevisi endaweni nangaphesheya kwemingcele. Izimali zamazwe omhlaba zidinga ukushintshaniswa ukuze kwenziwe ukuhwebelana namabhizinisi angaphandle.
Ngomqondo wayo oyisisekelo, imakethe ye-forex ibilokhu ikhona amakhulu eminyaka. Abantu bahlale beshintshana noma bethengisa izimpahla nemali ukuthenga izimpahla nezinsizakalo. Kodwa-ke, imakethe ye-forex, njengoba sikuqonda namuhla, iyisakhiwo sesimanjemanje.
Imakethe yeFX ilapho kuthengiswa khona izimali. Yiyo kuphela imakethe yokuhweba eqhubekayo futhi engami emhlabeni. Esikhathini esedlule, imakethe ye-forex ibiphethwe amafemu ezikhungo namabhange amakhulu, abebenzela amakhasimende. Kepha sekugxile kakhulu ekuthengiseni eminyakeni yamuva nje futhi abathengisi nabatshalizimali bamasayizi amaningi okuphatha sebeqalile ukubamba iqhaza kuwo.
Izinkampani ezenza ibhizinisi emazweni angaphandle zisengozini ngenxa yokuguquguquka kwamanani wemali lapho uthenga noma ethengisa izimpahla nezinsizakalo ngaphandle kwemakethe yazo yasekhaya. Izimakethe zokushintshaniswa kwamazwe angaphandle zinikeza indlela yokuvikela ubungozi bemali ngokulungisa isilinganiso lapho umsebenzi uzophothulwa khona.
Izici ezinjengezinga lenzalo, ukuhamba kwezohwebo, ezokuvakasha, amandla ezomnotho, kanye nobungozi bezepolitiki kuthinta ukunikezwa nokufunwa kwemali, okudala ukungazinzi kwansuku zonke ezimakethe ze-forex. Ithuba elikhona lokuzuza kuzinguquko ezingakhuphula noma zehlise inani lemali eyodwa ngokuqhathaniswa nenye. Isibikezelo sokuthi uhlobo lwemali olulodwa luyoba buthaka ngokuyisisekelo siyefana nokucabanga ukuthi enye imali kulaba bobabili izoqina ngoba izimali zidayiswa njengamabili.
Izimali zokuhweba zingaba yingozi futhi zibe yinkimbinkimbi. Imakethe ye-interbank inezigaba ezahlukahlukene zomthethonqubo, futhi izinsimbi ze-forex azilinganiswa. Kwezinye izingxenye zomhlaba, ukuhweba nge-forex kucishe kungalawulwa ngokuphelele.
Next Post פאָרעקס...
Previous Post Forex Trading: Isang Gabay...